तुवाचुङ साप्ताहिकले ४ विधामा ६ जनालाई पुरस्कार वितरण गर्ने ! - Sagarmatha Online News Portal
Sunday November 17, 2019 |
काठमाडौं । खोटाङ जिल्लाको हलेसीतुवाचुङ नगरपालिकाबाट प्रकाशित पहिलो साप्ताहिक पत्रिका ‘तुवाचुङ’ले ४ विधामा पुरस्कार वितरण गर्ने भएको छ । साप्तिाहिक पत्रिकाको पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर पत्रकारिता, समाजसेवा, खेलकुद र साहित्य विधामा ६ जनालाई पुरस्कृत गर्ने तुवाचुङ साप्ताहिकका सम्पादक दिपेन्द्र राईले बताए ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई आधारभूमि बनाएर खोटाङबाट प्रकाशित तुवाचुङ साप्ताहिकले २०७६ साउन ४ गते पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा पत्रिकाले चार विधामा ६ जनालाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।
तुवाचुङ साप्ताहिक सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले ४ विधामा ६ जनालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो । पत्रकारिता विधाअन्तर्गत दमन राई (नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ, अध्यक्ष), उत्तम चौलागाईं (प्रेस युनियन खोटाङ, अध्यक्ष) र केदार मगर (नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश पार्सद)लाई तुवाचुङ साप्ताहिक पत्रकारिता पुरस्कारले पुरस्कृत गरिने भएको छ । पत्रकार राई, चौलागाईं र मगरलाई जनही १५÷१५ हजार रुपैयाँसहित पुरस्कृत गरिने भएको हो ।
यसैगरी, समाजसेवी जनकराज राईलाई तुवाचुङ साप्ताहिक समाजसेवा पुरस्कारले पुरस्कृत गरिने भएको हो । तुवाचुङ साप्ताहिक समाजसेवा पुरस्कारको राशि १५ हजार रहेको छ ।
सितोरियो करातेकी अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री शेशुका राईलाई तुवाचुङ साप्ताहिक खेलकुद पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिने भएको छ । खेलाडी राईले श्रीलंका, भारतलगायत विभिन्न देशमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छन् ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिम साल्तेम्मानिवासी साहित्यकार विक्रम चेतनशील राईलाई तुवाचुङ साप्ताहिक साहित्यिक पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । पहिचानको पक्षमा साहित्यमार्फत आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएको साहित्यकार राईको ‘तुवाचुङ’ नामक गजलसंग्रह प्रकाशित छ । खस नेपाली, अंग्रेजी, चाम्लिङ राई र किरात लिपिमा प्रकाशित गजल संग्रहका लागि उहाँलाई पुरस्कृत गरिने भएको हो ।
वि.सं. २०७५ साउन ४ बाट प्रकाशित तुवाचुङ साप्ताहिक वर्ष दिनदेखि नियमित प्रकाशित हुँदै आएको छ । तुवाचुङ साप्ताहिकले जनपक्षीय पत्रकारितालाई मूल मुद्दा बनाउँदै आएको छ । ग्रामीण पत्रकारितालाई थप आकर्षित बनाउन भरमग्दुर प्रयासरत पत्रिकाले आवाज विहीनको आवाज बन्ने मूलभूत उद्देश्यबाट विचलन नहुने सम्पादक राईले बताए ।
Published On: २ असार २०७६, सोमबार 318पटक हेरिएको